Vaovao - impiry no soloina ny kojakoja fanaovana pirinty?
Mpanjifa maro no hanontany hoe isaky ny inona no manolo ny kojakojam-pirinty rehefa mividy azy? Toa avo be ny sain'ny mpampiasa an'io olana io. Androany, amin'ity fotoana ity dia tiako hovaliana amin'ny antsipiriany ireo fanontaniana ireo ho anao.
Diniho tsara, ny kojakoja fanaovan-gazety momba ny menaka dia mizara ho ampahany sy singa. Araka ny anarany, ny mitafy faritra dia ampahany mila soloina matetika, ary lava ireo faritra ireo ary tsy mila soloina. Ireo faritra mitafy sy kojakoja masinin-tsolika.
Ny ampahany mitafy menaka fanosotra amin'ny ankapobeny dia misy: press spindle, press screw, ringing bushing, bushing, ravin-tsakafo, peratra mofomamy, scraper, press bar, sns.
Ny ampahany amin'ny gazety fanaovan-tsolika dia matetika ahitana: body press press, press cage, frame, sns.
30-50 taonina ny fahaizan'ny press menaka 260. Fa maninona no tsy dia mahomby ny fitsaboana? Izany dia voafaritra indrindra arakaraka ny menaka. Ohatra, rehefa manindry voanjo ny presseur, dia ambany ny hamafin'ny voanjo, ka mora kokoa ny manindry, ary kely ny anaovan'ny masinina. Noho izany, lava kokoa ny tsingerin'ny fanoloana kojakoja ary lehibe kokoa ny fahafaha-manodina. Rehefa manery ny voan'ny melon dia potsero amin'ny akorany. Ny hamafin'ny menaka dia avo, ary ny fitafiana anatiny amin'ny efitranon'ny gazety fanaovan-gazety dia somary matotra. Ho fohy kokoa ny tsingerin'ny fanoloana kojakoja, ary ho kely ny fahaiza-manao fanodinana. Amin'ny ankapobeny, afa-tsy ireo faritra marefo, ny milina fanodinana menaka dia nampiasaina nandritra ny folo taona mahery nefa tsy nisy olana. Ny kojakoja fanodinam-bokin'ny solika ataontsika dia voadio avokoa amin'ny alàlan'ny fitsaboana karbaona sy azota hafanana 24 ora. Manana mpiasa matihanina manokana izahay, atrikasa famokarana mandroso, ekipa mpamokatra matihanina ary ekipa fivarotana. 100% miantoka ny kalitaon'ny vokatra sy serivisy aorian'ny varotra.
Ny milina fanodinana menaka dia matetika no misy ny efitrano fanaovana press, boaty, boaty fanamoriana, halavirana tanteraka ary seranan-tsakafo. Mora soloina ny kojakoja sasany ao amin'ny vata fanaovan-gazety sy ny boaty fanodinana. Ireo kojakoja ireo dia ny vodin-tsolika, ny tsindry, ny peratra, ny kirihitrala, ny peratra mofomamy, ny fantsom-bokotra, ny kodiarana fanodinana, ny kodiarana lehibe sy kely, ny fitondra, ny tanany, sns. slag, na output ambany, tsy misy fitaovana, izany hoe marary ny ampahan'ny masininao ka mila soloina.
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina fanaovan-gazety solika, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Gazety Oliva Oliva, Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Mpanondraka solika, Mpanondraka solika voa,